BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/15/20150အကြံပြုခြင်း
မန္တလေးမှာ ဘုရင်ကြီး က လိပ်စီးပြီး သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ရှုစားတဲ့ Performance
မိဘပြည်သူများ ခံ ဗျာမဏ္ဍပ်
အလုံ၊ ငုဝါလမ်းက စတုဒီသာမဏ္ဍပ်လေး တခုရဲ့ နာမည်
သတင်းဓါတ်ပုံ-Min Nay Htoo.
Z Y Mg Mg ကဒါမျိုးလေးတွေရှာပေးတာလဲနိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပဲတဲ့....
Ban it.Stop it. Dangerous action.
မီးသတ်ပိုက် သင်္ကြန် အကျနေ့မြင်ကွင်း။ဓာတ်ပုံကိုမျိုးခိုင်
Law & Order လို့တံဆိပ်တပ် စွမ်းအားရှင်တွေ
Law & Order လို့တံဆိပ်တပ် စွမ်းအားရှင်တွေကို မ-ဘ-သက
ပြည်နယ်သံဃနာယက/မြို့နယ်သံဃနာယက ဆရာတော်တွေပါ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မှ မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့နဲ့မဘသ အဖွဲ့က
၎င်းတို့နဲ့ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်နယ်အစိုးရမှ တရားမ၀င်တဲ့ လူမိုက်အဖွဲ့ကစည်းတွေကို
အရေးမယူ-မဖျက်သိမ်းရင် ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတမှုလုံးဝရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။(Kotoe Taunggyi)
မန္တလေးမှာ ဘုရင်ကြီး က လိပ်စီးပြီး သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို...
Z Y Mg Mg ကဒါမျိုးလေးတွေရှာပေးတာလဲနိုင်ငံတာဝန်ထမ်...